Shwe Lar Hot Pot | Kamaryut | Yangon | yathar
Shwe Lar Hot Pot
3.54Kamaryut, Yangon
Tel 09 972 349188
Address ,Nar Nat Taw St.,Hledan,Kamayut. Yangon 11041, Kamaryut, Yangon
Open times Sunday: 11:00 - 22:00
Monday: 11:00 - 22:00
Tuesday: 11:00 - 22:00
Thursday: 11:00 - 22:00
Friday: 11:00 - 22:00
Genre Yangonese , Hot-pot , Myanmar , Casserole
,Nar Nat Taw St.,Hledan,Kamayut. Yangon 11041, Kamaryut, Yangon
Su Theingi Theingi
2018.07.26 Lunch 10,000-20,000 3
ဆိုင်ကဝန်ဆောင်မှုလည်းကောင်းတယ် စားရတာလည်း အဆင်ပြေတယ် စားလို့လည်းအရမ်းကောင်းတယ် ဒါကြောင့် အရမ်းကြိုက်တ်ရှင့် နောက်ဆိုရင် Promotion တွေလုပ်ပေးပါအုံး ရှင့်။
စားရတာနဲ့ ဈေးနဲ့ အရမ်းတန်ပါတယ်။ ဝန်ဆောင်မှုလည်းကောင်းတယ်ရှင့်။ နောက်လည်း အမြဲ လာအားပေးမယ်။ နောက်ဆိုရင် Promotion လေးတွေချပေးပါအုံး။ လက်ဆောင်လေးတွေလည်းပေးပါ။ အားလပ်ရက်ကျရင် သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ လာအားပေးပါ့မယ်။
2018.07.26 Lunch 10,000-20,000 5
2018.07.20 Lunch 5,000-10,000 3